Nin somali ah oo weerar mindi ah dad ku weeraray Mareykanka - iftineducation.com
iftineducation.com – Dahir Aden oo asalkiisa soomaali yahay degan dalka Mareykanka ayaa habeenimadii ay soo galeeysay isniinta wuxuu dhaawac u geeystay sagaal ruux oo ka adeeganayey suuq ku yaala gobolka Minasota ee dalka Mareykanka.
Ninkan oo mindi ku hubeeysnaa ayaa waxaa toogtay askari aan markaas heegan ku jirin.
Ninkan ayaa wararku sheegayaa inuu u shaqeyn jiray shirkad kuwa amaanka suga ee sekuuritiga loo yaqaaano, hase ahaatee shabakadda wararka Amaq News ee wararka u faafisa kooxda Daacish ayaa sheegay i Dahir Aden oo 22 jir soomaali ah uu, howlgalkaasi uu fuliyey.
FBi-da Mareykanka waxaa ay ka gaabsadeen sugnaanta warkaasi. Bale waxaa ay ku tilmaameen “weerar suuragal ah”
Mareykanku waxaa uu ka mitten yahay dalalka ay dhalinyarro badan oo soomaali ah ay ka soo hayaamaan kuwaas oo ka bar bar dagaalama kooxaha argagaxisada ah ee ka dagaalama Soomaaliya iyo Suuriya.